ओलीको बिकल्प प्रचण्ड होइनन्, बरु भीम रावल हुन् – iNews16
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जनताको चाहाना अनुरुप काम गर्न नसकेको सत्य हो? तर, पछिल्लो परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने ओलीको बिकल्प प्रचण्ड कुनैपनि हालतमा हुन सक्दैनन्।
राष्ट्रियताको सवालमा ओलीको स्पष्ट अडान छ। प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनालहरु विदेशी शक्तिहरुको इशारामा काम गर्ने पात्रहरु हुन्। यीनीहरु अहिलेको सनदर्भमा कुनै कोणबाट ओलीको बिकल्प हुन सक्दै-सक्दैनन्।
बरु ओलीको बिकल्प भनेका भीम रावल हुन सक्छन्। उनीप्रति युवा जमातको राम्रो र सकारात्मक दृश्ष्टिकोण समेत छ। राष्ट्रियताको हिसाबले रावल ओलीपछिको नेता मानिन्छन्। त्यसकारण ओलीको बिकल्प प्रचण्ड होइनन् बरु भीम रावल हुन्।
Previous अन्तिम संस्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन, घाटबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए !
Next भारत र चीनबीचको तनावका बाबजुत भारतलाई हतियार दिन रुस तयार, के छ चीनको प्रतिक्रिया ?